Inona no asehon'ny florografia?
Ny fluorographie no fomba lehibe indrindra ampiasaina amin'ny fitsaboana ao an-trano. Ny rosin-jaza dia mamela anao hahazo sary iray, izay ahafahanao manatsoaka hevitra momba ny fahasalaman'ny taova sy ny tavy. Ny fluorinora dia miteraka fanararaotana amin'ny rétrole, izay hita taratra amin'ny lafiny iray, avy eo amin'ny efijery dia ahafahanao mahazo sary misy taova anatiny.
Inona no asehon'ny rajako ray?
Ny fomba fanandramana dia maneho ny fiovan'ny toetran'ny taova ao amin'ny tratra, izay mety manondro ny fisian'ny aretina. Matetika ny fiovana toy izany dia vokatry ny fampivoarana ny fifindran'ny tavy ao amin'ny rafi-panafody.
Na izany aza, dia tsy misy ifandraisany ny aretina sasany amin'ny dipoavatra. Ohatra, ny pnemonia dia azo raisina amin'ny dingana iray monja. Noho izany, ny valin'ny fanontaniana na ny fampiasana ny fluorographie dia mampiseho ny fiterahana ny lung . Na izany aza dia azo atao ny mamantatra ny aretina toy izany amin'ny dingana lehibe amin'ny fandrosoana.
Noho izany, tsy azo atao ny famotopotorana amin'ny alalan'ny fluoroographie. Mampiasaina amin'ny tranga tahaka izany:
ho an'ny famaritana ny fibrosisy sy ny sclérose;
fanandramana ny vatana vahiny;
fanaraha-maso ny toerana tokony hodiavin'ny tavoahangy sy kathetera ao amin'ny sambo, fo sy ny tracteur respiraire;
mamaritra ny fisian'ny rivotra na rano;
fanombanana ny toetry ny taova amin'ny trauma.
Inona no asehon'ny fluorographie momba ny havokavoka?
Rehefa taratra izy ireo, dia samy hafa ny fihetsiky ny taova amin'ny taratra. Satria lasa tsy misy dikany ny sary. Ny havokavoky tsara dia manana rafitra fanamiana. Raha misy ny areti-maso, dia ho hita ho maizina ny tombo-kase. Ny hevi-dehibe, fa ny mifanohitra amin'izany, dia hampiseho ny hafanana tafahoatra.
Raha hamaly ny fanontaniana raha hita ny fluorographie momba ny tuberculosis , dia ilaina ny manavaka fa io fitsapana io dia iray amin'ireo fomba mahomby amin'ny fanandramana ny aretina. Ny zava-misy dia ny fihainoanao dia tsy mamela anao hamaritra ny fiovana marina eo amin'ny taova, raha eo amin'ny sary dia misy fôsily hita maso na lehibe iray rehefa mifandray izy ireo. Azo atao koa ny mamantatra ireo tonon-kira nofaranana rehefa rava ny tavy.
Manana kanseran'ny havokavoka ve ny fluorographie?
Avelao hametraka fampahalalam-baovao mahatsiravina momba ny toetry ny fahasalamana io fomba io, nefa mahomby amin'ny famaritana ny tuberculosis sy ny oncologie amin'ny havokavoka. Misaotra an'io fomba fitsaboana io fa azo atao ny manambara marimaritra iraisana eo amin'ny dingana voalohany.
Olitra avy amin'ny holatra eo amin'ny hoditry ny vatana
Fananganana tanana - ny antony sy ny fitsaboana amin'ny sokajin-taona rehetra
Fangatahana fohy 2016
Rhubarb - toetra mahasoa
Fanamiana ny sekoly - sarafan
Sakafo ho an'ny tafio-drivotra
Inona no fandrakofam-potoana?
Ny toerana mahafinaritra indrindra any Moskoa
Ahoana no hamalianao ilay olona namadika anao?
Andro tsy misy fiara
Pig sy Pig - Fifandraisana
Jirama tsara tarehy - 44 sary avy amin'ny modely maoderina indrindra amin'ny fotoana rehetra